qCharge: new charger for your Apple Watch in "Crowfunding" campaign | Ndinobva mac
qCharge: chaja itsva yeApple yako Watch mushandirapamwe we "Crowfunding"
Haisi nguva yekutanga kuti titaure nezve zvishongedzo, majaja uye zvimwe zvinhu zvine chekuita neApple brand zvishandiso. Nhasi tinokuunzirajajaja nyowani, iri kuwana mukurumbira munguva pfupi yapfuura neayo "crowfunding" mushandirapamwe, uye iri kunyatsonakidza.
qCharge inokutendera kubhadharisa yako Apple Watch pasina kudikanwa kwetambo, nekuti ine bhatiri rakabatanidzwa kuitira kuti, kana usiri kuzove pamba kwemazuva mashoma, kungave kubasa kana kuzororo, haufanire kutora charger yekutanga uende nayo.
Kana iwe uchingozove usipo pamba kwemazuva mashoma, ungangodaro usade kutora machaja ese ane wired aunotenderedza imba. qCharge inokutendera iwe kufamba neako Apple Watch, uchisiya tambo kumba. Iine yayo yakavakirwa-mukati 1200 mAh bhatiri, uye yayo 3A inokurumidza kuchaja, inopa mukana wekuchaja smartwatch yedu kaviri munguva yekurekodha, nokudaro tichichengetedza nguva yekuchaja nekushandisa kukuru kwewachi.
Uyewo, qCharge Icho chaicho chakangwara, nekuti nekuda kweyakavakirwa-mukati CPU, inoona uye inogadzirisa tembiricha yechigadzirwa, uye inogona zvakare kushandiswa kuchaja netambo. Unogona kuona iyo inosimudzira vhidhiyo pano.
Yakanakira iwo mazhizha ekuzorora, uko pamwe chinhu chakanakisa kusave padhuze nepulagi inobhadharisa Wedu. Uye zvakare, mutengo unovimbisa kuve chimwe chezvakanakisa zvechaja iyi. PKwe $ 39 chete, unogona kutengesa zvisina waya chero Apple Watch yauinayo.
Zvichida qCharge kuva nyeredzi isina waya charger yeWatch mamodheru. Parizvino, zano racho rinogona kutengwa kubva kuburikidza Kickstarter, mushandirapamwe we "crowfunding" wavakagadzira uye uri kubudirira kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » qCharge: chaja itsva yeApple yako Watch mushandirapamwe we "Crowfunding"
Feedy, RSS muverengi, yemahara kwenguva shoma
Tora 40 infographic matemplate ePhotohop yeyuro imwe chete